नयाँ आईफोनको लागि टी-मोबाइल ट्रेड-इन प्रोग्राम: यो निश्चित रूपमा स्याउ एप्पलको भन्दा बढी उदार हो!
मुख्य समाचार र समीक्षा नयाँ आईफोनका लागि टी-मोबाइल ट्रेड-इन प्रोग्राम: यो एप्पलको भन्दा निश्चित उदार हुन्छ।
नयाँ आईफोनका लागि टी-मोबाइल ट्रेड-इन प्रोग्राम: यो एप्पलको भन्दा निश्चित उदार हुन्छ।
आईफोन XR, XS, XS अधिकतम T-Mobile Costco गोदाम $0० सम्म
व्यापार मा सम्झौता
केहि दिन अघि, एप्पलले आक्रमक रूपमा नयाँ आईफोनको तिर आफ्नो ट्रेड-इन प्रोग्रामलाई बढावा दिन शुरू गर्यो यसको मुख्य पृष्ठमा , Apple.com मा मा। अभूतपूर्व, निश्चितको लागि, केहि अनुमान लगाउँछ कि यो हुन सक्छ किनभने २०१ iP आईफोन्सले राम्रोसँग बेचेका छैनन्। अवश्य पनि हामी यो भन्न सक्दैनौं कि एप्पस तथ्य हो, किनकि एप्पलले अब बिक्री संख्या रिपोर्ट गर्दैन।
जे भए पनि, यदि तपाईं आईफोन Plus प्लस वा आईफोन own स्वामित्व पाउनुहुन्छ भने, तपाईं नयाँ फोनहरूमध्ये एउटा - आईफोन एक्सआर, आईफोन एक्सएस, वा आईफोन एक्सएस म्याक्समा राम्रो $ २०० छुट पाउनुहुनेछ। छुटको सर्तमा नराम्रो होइन, तर यदि तपाईंको उपकरण राम्रोसँग राखिएको छ भने, तपाईंले यसको लागि दोस्रो हातको बजारमा राम्रो मूल्य पाउन सक्नुहुनेछ।
ठीक छ, टी-मोबाइल र कोस्कोले तपाईंलाई राम्रो ट्रेड-इन प्रस्ताव दिनको लागि टिम मिलाएका छन्। एउटाको लागि, तपाईले फोनका फराकिलो किसिमका व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ, केवल आईफोन मात्र होइन, तर तपाईले आफ्नो पुरानो उपकरणको लागि बढी पैसा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यो सम्झौता प्राप्त गर्नका लागि तपाईले कस्टको गोदाम ईंट र मोर्टार स्टोरमा जानु पर्छ र T-Mobile मा सक्रिय गर्न नयाँ आईफोन प्राप्त गर्नु पर्छ। तपाईंलाई खरीदको 8-8 हप्ता भित्रमा एक प्रीपेड मास्टर कार्ड जारी गरिनेछ, र यो तपाईंको छुट पैसा राख्नेछ।
त्यसो भए, T-Mo & apos को प्रस्ताव एप्पल & apos को भन्दा कति उत्तम छ? ठिक छ, यदि तपाईंसँग पुरानो आईफोन or वा c सी छ, एप्पलले केवल $ २ to सम्म यसको लागि दिन्छ। T-Mobile र Costco ले तपाईंलाई $ १ to० सम्म दिन्छ। आईफोन,, Plus प्लस, आईफोन,, वा आईफोन Plus प्लसका लागि, टी-मोले तपाईंलाई $0० सम्म पुर्‍याउँछ, जबकि एप्पलले $ २ /० / $ /०० / $ /०० / $ to$० सम्म प्रस्ताव गर्दछ। उल्लेख गर्न मिल्दैन, तपाईं पुरानो नेक्सस,, LG G4, ग्यालक्सी नोट or वा ग्यालक्सी S6, र अन्य T-Mobile मार्फत व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ & apos को पूर्ण सूची:
आईफोन plus प्लस गहिरो निलो
कसरी अनुकूलन रिकभरी फ्ल्यास गर्ने
AT&T ले सम्भावित खेल परिवर्तन गर्ने G जी टेक्नोलोजी रोल आउट गर्न थाल्छ
गुगल फोटोहरू 'उच्च गुणहरू' बनाम 'मूल': के फरक छ र तपाईंको ख्याल राख्नु पर्छ
तपाईंको ग्यालक्सी S7 को लागि सामसु Samsung ग्यालेक्सी S8 मौसम अनुप्रयोग विजेट समात्नुहोस्
हुआवेई वाच3प्रो समीक्षा: किनारका वरिपरि असभ्य
Purported LG G3 (D-850) बेंचमार्क स्क्रिनशट QHD प्रदर्शन पुष्टि, अष्ट-कोर MediaTek प्रोसेसरमा संकेत
२०२१ मा सर्वश्रेष्ठ आईफोन एसई ब्याट्री केसहरू
तपाइँको भेरिजन वा स्प्रिन्ट सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस III मा ती कष्टकर आपतकालीन सतर्कताहरू कसरी रोक्न सकिन्छ
तपाईं अब ट्वीटहरूलाई ड्राफ्टको रूपमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र पछि पछि अनुसूचित गर्नुहोस्
Verizon ले अब यसको कुल मोबाइल सुरक्षा योजनाको साथ उही दिन क्र्याक स्क्रिन मर्मत प्रस्ताव गर्दछ
वालमार्टबाट एप्पल आईफोन c सी खरीद गर्नुहोस् सम्झौतामा $ for$ मा; रिटेलरले बेस्ट बाइ र os 50 को सम्झौतामा सम्झौता गर्दछ